Safari ရဲ့သမိုင်းကို Mac မှာဘယ်လိုကြည့်မလဲ | ငါက Mac ကပါ
Safari ရဲ့သမိုင်းကို Mac မှာဘယ်လိုကြည့်မလဲ။
မသာ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း သင့်ကွန်ပြူတာပေါ်ရှိ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအလျင်အမြန်ကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းပေးသည်။ ၎င်းကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်၎င်းသည်အထိရောက်ဆုံးဖြစ်သည် OS X တွင်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသင့် Mac ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုကြာရှည်စေသည်။
Mac သုံးစွဲသူများစွာသည် Safari ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသောကြောင့်သူတို့၏ရှာဖွေခြင်းသမိုင်းကြောင်းသည်ယခင်ကသွားရောက်ဖူးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှမှတ်တမ်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် ယခင်ကလည်ပတ်ခဲ့သည့် site သို့သင်၏လမ်းကိုပြန်ရှာပါ သင်၏ရှာဖွေခြင်းသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုရှာဖွေခြင်းသည်၎င်းတွင်သိုလှောင်ထားသောလနှင့်နှစ်ပေါင်းများစွာနှင့်ပင်အလွန်ငြီးငွေ့ဖွယ်ကောင်းသည်။
iOS မှာလိုပဲ Mac အတွက် Safari က shortcut တစ်ခုပေးထားသည် tab တစ်ခုချင်းစီအပေါ် မူတည်၍ ယခင်ကဝင်ရောက်ဖူးသောမည်သည့် web page ကိုမဆိုလျင်မြန်စွာခုန်နိုင်စေသည်။
သင်၏ Mac တွင်မကြာသေးမီက Safari သမိုင်းကိုကြည့်ရှုရန်
1) သွားပါ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း သင်၏ Mac တွင် tab အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်အချို့ကိုသွားပြီး link အချို့ကိုလိုက်နာပါ။
2) Make ကလစ် y Safari တွင် 'Back' ခလုတ်ကို နှိပ်၍ ဖိထားပါ ထိပ် toolbar ကိုအပေါ်။
3) ဝဘ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ ယခင်ကမီနူးအပေါ်သွားရောက်ခဲ့သည်နှင့် mouse ကိုခလုတ်ကိုလွှတ်လိုက်ပါ။
ဤစာရင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်လက်ရှိ tab ၏သမိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အခြားနေရာတစ်ခုသို့ပြောင်းပြီး၊ ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ကိုင်ထားပါက၊ နောက်သို့ရှေ့သို့ Safari မှ သင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနား browsing သမိုင်းမြင်လိမ့်မည် သင်လည်ပတ်ခဲ့သည့်သီးခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်မူတည်သည်။ သင်မြင်နိုင်သည်အတိုင်းဖြစ်သည် အရမ်းလွယ်တယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကအဲဒီမှာသူတို့ကိုဖတ်လျှင်မဟုတ်လျှင်သင်မသိရသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဖြတ်လမ်း ဒါ့အပြင်အလုပ်ဖြစ်တယ် အတွက် Safari ၌တည်၏ iPhone, iPod touch နှင့် iPad။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Jordi က၎င်းအားမည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုမကြာသေးမီကသင်ကြားခဲ့သည် ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်းခင်ဗျားဒီမှာဘာကိုတွေ့နိုင်တာလဲ ဆောင်းပါး။ မင်းကြည့်ချင်ရင် download သမိုင်း သင်၏ Mac ပေါ်တွင်သင်လုပ်နိုင်သည် ဒီမှာ။ ပြီးတော့မင်းလိုချင်တာက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း browsing သမိုင်း Safari မှအသာပုတ်ပါ ဒီမှာ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac ကွန်ပျူတာများ » Safari ရဲ့သမိုင်းကို Mac မှာဘယ်လိုကြည့်မလဲ။
Topotamalder ဆေး ဟုသူကပြောသည်
သင်အမှန်တကယ်ဤဆောင်းပါးကိုရေးထားပြီလား ??? သငျသညျကျောက်ကိုရယ်မောပါသလား
Chessy ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ဟားဟား၊ မနက်ဖြန်မှာ“ မင်းရဲ့ Mac ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ” ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်လိုက်တယ် ဟားဟား
အက်ပဲလ်တီဗီသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်အကြီးမြတ်ဆုံးတိုးတက်မှုဖြစ်သည်
၂၀၁၇ ခုနှစ်မကုန်မီတွင် Apple သည်အိန္ဒိယ၌ Apple Store သစ်သုံးခုဖွင့်လှစ်မည်